Nvidia na Valve Wetara DLSS, teknụzụ na - enyere ndị na - egwu egwuregwu aka inweta arụmọrụ na Linux | Site na Linux
Ọchịchịrị | 11/06/2021 08:42 | Emelitere ka 11/06/2021 20:30 | Noticias
N'oge Computex 2021, Nvidia kwuputara mmekorita ya na Valve iji nye nkwado DLSS (Omumu ihe omimi nke oma) nke di na kaadi RTX ha.
DLSS, ma ọ bụ Nnyocha Learningmụ Ihe omimi, bụ teknụzụ nke na-enye gị ohere ịmekwu arụmọrụ na-enweghị ịhapụ ogo ihe oyiyi dị oke. Iji mee nke a, egwuregwu ahụ na-agba na mkpebi dị ala karịa mkpebi ala ala na mgbe ahụ oyiyi ahụ gbanwere na mkpebi nke ala site na iji algorithms.
Nkwuputa nkwado maka Valve iji kwado teknụzụ DLSS ya bụ ozi ọma, ebe DLSS nwere ike meziwanye ogo etiti na enweghị mmetụta na-emetụta eserese eserese.
“DLSS na-eji ntụgharị asụsụ AI dị elu iji mepụta ụdị onyonyo dị ka mkpebi ala na mgbe ụfọdụ ọ ka mma, ebe ọ bụ naanị ịtụgharị asụsụ nke pikselụ. Usoro nzaghachi oge dị elu na-ewepụta nkọwapụta onyonyo dị nkọ ma kwalite nkwụsi ike to-frame, ”ka NVIDIA na-ekwu.
Mmetụta nke DLSS nwere ike iju anya na egwuregwu na-akwado teknụzụ a. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ karịrị okpukpu abụọ okpukpu abụọ na-enweghị DLSS, nke na-enweghị obere mmetụta ọ bụla. Mmasị nke teknụzụ a dị na mmụta miri emi.
Ngwá ọrụ ntanetị a zụrụ azụ ka mma n'ịchọpụta akụkụ nke ihe oyiyi dị mkpa maka nghọta mmadụ karịa usoro mgbagha ochie na-arụ ọrụ nke ọma karịa ma a bịa n'ịgbanyepụta raster ihe nlele n'ime ihe anya mmadụ na-atụ anya ịhụ.
O di nwute Nvidia DLSS bụ nke onwe ya ma chọọ ngwaike pụrụ iche na kaadị Nvidia ọhụrụ (Usoro RTX 2000 na nke dị n'elu), na mgbakwunye eziokwu ahụ bụ na rue ugbu a, Nvidia enyebeghị ihe ngosi a na ndị ọkwọ ụgbọ ala Linux ya, bụkwa ndị nwe ya.
Dị ka ụfọdụ ndị na-eme nnyocha si kwuo, nkà na ụzụ a ga-adọrọ mmasị ka a na-akọ na Valve na-atụle ịme ngwaọrụ ngwaọrụ egwuregwu.
Anyị rụrụ ụka na DLSS nwere ike ikwe ka onye ọzọ-gen Gbanye gbanwee nke ọma karịa klaasị ya, otu ihe ahụ ga-eme na laptọọpụ na-enweghị tọn nke eserese eserese, nke nwere ike ime Linux.
Na Windows, DLSS bụ otu n’ime ọtụtụ atụmatụ Nvidia nke na-eme ka ịkwaga na kaadị eserese Radeon siri ike ịtụle, ọbụlagodi mgbe ọnụahịa ziri ezi na kaadị ahụ siri ike. Na Linux, ọrụ ndị na-nwesịrị na ọ bụ ihe siri ike karị ịhọrọ Nvidia.
AMD meghere ndị ọkwọ ụgbọala Radeon maka Linux na 2015, na-eji ohere n'efu na oghere mepere emepe AMDGPU kernel nke o jiri meziwanye ogo ndị ọkwọ ụgbọ elu nke ọma, na-eme ka Radeon ndịna-emeputa ihe kacha mma GPU kacha mma na Linux.
Maka ụfọdụ, ọbụlagodi na DLSS kwekọrọ na egwuregwu niile, "kama naanị 50 ma ọ bụ 60, ọ ga-esiri ike ịhapụ ihe niile maka mmụba na ọnụego."
AMD's DLSS teknụzụ dịkwa n'okporo ụzọma ọ bụ. Na Computex 2021, AMD kwuputara ụdị nke AI nke bara uru, nke ọ kpọrọ FidelityFX Super Resolution (FSR). Ruo taa, amabeghị ọrụ nke FSR. N'ụzọ na-akpali mmasị, FSR nwekwara ike ịgba ọsọ na Nvidia GPUs, ọbụlagodi ndị na-anaghị akwado Nvidia's DLSS.
O di nwute, FSR ka bu nkwa na oge adịka a gaghị ewepụta ya ruo ụbọchị iri abụọ na abụọ nke ọnwa ma ọ edoghị anya ma ọ bụrụ na ọ ga-adị ozugbo maka Linux na mwepụta ụbọchị.
“Anyị enweghị ọtụtụ tupu na mgbe ụdị mma ụdị dị ka anyị ga-achọ. Ọ bụrụ na FSR enweghị ike ịsọ mpi na DLSS na ogo, ọ gaghị enwe isi ma ọ bụrụ na FSR ga-ezukọ ma ọ bụ karịa gafee ogo ume ọhụrụ ya, ”ka AMD na-ekwu.
Ọ bụ ezie na Nvidia kwuru na nkwado Vulkan ga-abata n’ọnwa a na nkwado DirectX ga-abata n’oge mgbụsị akwụkwọ, ụlọ ọrụ ahụ ekwughi usoro iheomume maka DLSS ịbịa Proton. Mana ọ dị mma ịhụ na ọ na-aga n'ihu na-agba ọsọ maka egwuregwu Linux iji bie ndụ Windows.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Nvidia na Valve wetara DLSS, teknụzụ na-enye ndị egwuregwu ohere ịrụ ọrụ karịa na Linux